तपाईले कति प्रकारको चियाको स्वाद लिनु भएको छ ? अब आयो ८० प्रकारको चिया — Bhaktapurpost.com
तपाईले कति प्रकारको चियाको स्वाद लिनु भएको छ ? अब आयो ८० प्रकारको चिया
काठमाडौं । तपाई दिनमा कति कप चिया पिउनु हुन्छ ? कति प्रकारको चियाको स्वाद लिनु भएको छ ? सायद सामान्यत: ३ वा ४ प्रकारको मात्र होला । लेमन, मिल्क, ब्ल्याक आदि । तर नेपालमा अब यो भन्दा पनि बढी, ८० प्रकारको चिया बजारमा आएको छ ।
नेपा टि प्रा.लिले अन्तराष्ट्रिय स्तरका ८० भन्दा बढी प्रकारका चिया बजारमा ल्याएका हुन् । नेपा टि प्रा.लि का सञ्चालक आषिश गिरीले नेपाली बजारमा नपाइने फलफुलका चियाहरु, सुगर र प्रेसरका रोगीहरुका लागि हितकर मानिएको अर्गानीक चिया लगायत विभिन्न ८० प्रकारका चियाहरु अब मज्जाले पिउन सकिने बताए ।
चियाको मूल्य पनि अरु चियाको तुलनामै रहेको छ । नेपाली कच्चा पदार्थहरुलाई प्रयोग गरेर बनाइने ८० प्रकारका चियाहरु न्युनतम रु. २० देखि अधिकतम रु. २ सय सम्मको रहेको छ । नेपा टी सपमा १८ प्रकारका कालो चिया, १५ प्रकारका दुध चिया, १३ प्रकारका पु्रmट टि, १५ प्रकारका नेपा आइसीइडी टी र अर्गानीक चिया पिउन पाइने पनि गिरीले बताए ।
साथै, नेपालमा नै पहिलो पटक नेपा टि सपले नेपालीको व्यस्ततालाई बुझेर होम डेलभिरीको पनि व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक गिरीका अनुसार होम डेलीभरीका लागि पहिला ‘नेपा टी’ को सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा सदस्यताका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । ग्राहक बनेपछि ग्राहकहरुले “नेपा टि टेष्ट द बेस्ट” फेसबुक पेजमा एड भएर तथा टेलिफोन मार्फत बिभिन्न प्रकारका चियाहरु अर्डर गर्न सक्नेछन् ।
मिनु हेरेर ग्राहकले कुनै पनि प्रकारका चिया न्युनतम ५ कप भने अर्डर गर्नुपर्नेछ । अर्डर भएपछि मिनु अनुसारको बिल सहित रेष्टुरेन्टले निःशुल्क होम डेलिभरी गरिदिने छ । ग्राहकले चियाको साथै केक तथा बेकरीका आइटम समेत अर्डर गर्न सकिने छन् ।
त्यसैगरी नेपा टि सप भित्रै पुस्तकालय र म्युजीकसेन्टर समेत उपलव्ध छन् । नेपा टि भित्र छिरेर ग्राहकहरुले चिया अर्डर गरेपछि बिभिन्न प्रकारका पुस्तकहरु निःशुल्क रुपमा अध्ययन गर्न सक्ने छन् ।